स्वस्थ शरीरका लागि कस्तो खानपान – Health Post Nepal
२०७७ असोज १९ गते ११:१४
शरीर स्वस्थ भएमात्र मानसिक रुपमा पनि बलियो हुन सकिन्छ। आशस्य, रोगी शरीरले कुनै पनि काम गर्न जाँगर लाग्दैन। आरोग्य, अर्थात रोगमुक्त हुनु। स्वस्थ्य रहनु शरीरको स्वभाविक अवस्था हो। रोग, विकार, कष्ट, दुख वा दुर्बलता अस्वभाविक अवस्था हो ।
प्रकृति व्यवस्थाको उल्लंघनको कारण यस्तो हुन्छ। जो व्यक्ति प्राकृतिक जीवन होइन, कृतिम वा भौतिक जीवनमा डुब्छन्, उनीहरु स्वास्थ्यप्रति लापरवाही हुन्छन्। यसको कारण शरीरमा रोग लाग्छ। यसमा खानपानको गडबडी एक ठूलो कारण हो।
खानपानसम्बन्धी महत्वपूर्ण कुरा
१. खाना अर्थात आहार त्यही हो, जसबाट शरीरलाई आवश्यक सबै पोषण तत्व प्राप्त हुन्छ।
२. खाना मिठो र सुपाच्य हुनुपर्छ।
३. खानेकुराले शरीरलाई उर्जा प्रदान गर्छ। निरोगी बनाउँछ।
४. खाना बिस्तारै चपाएर खानुपर्छ, जसले गर्दा खानेकुरामा रहेको पोषक तत्व शरीरले राम्ररी लिन्छ।
५. प्रकृतिसँग जति नजिक हुन्छौ, उत्तिनै हामी निरोगी हुन्छौं। ऋतु अनुसार पाइने सागसब्जी, अन्न, फलफूल, कन्दमुल खानुपर्छ।
६. जतिसुकै भोक लागे पनि तीन भागको एक भाग पेट खाली राख्नुपर्छ, जसमा वायु रहन्छ। यसले पाचन प्रणालीलाई सहज बनाइदिन्छ।
यो मानव जीवनको तीन आधार स्तम्भ हो। यसमा आहार एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हो।
आहार के हो?
यसको बयान गर्दै महर्षि चरकले भनेका छन्, ‘अन्न–नलीद्वारा जुन पदार्थ आमाशयमा पुग्छ। र, त्यो हाम्रो शरीरमा धातुको पोषण, रक्षण र क्षतिपूर्ति गरेर जीवन–प्रक्रियालाई संयमित राख्छ। त्यही आहार हो।’
अर्थात आवश्यक पोषण तत्व परिपूर्ति गरेर शरीरको कार्य–सम्पादन गर्नमा सघाउ पु¥याउने नै आहार हो । यसले शरीरलाई उर्जा प्रदान गर्छ।
आर्युवेदमा भनिएको छ कि, शरीरको निर्माण पोषणयुक्त आहारबाट हुन्छ। अर्थात पोषणले युक्त। अयुक्त आहारले शरीरमा रोग उत्पन्न गर्छ।
युक्त आहार असलमा मिताहार नै हो। देश, काल, ऋतु, मात्रा, शारीरिक बनावट र मानसिक वृत्तिको ध्यानमा राखेर युक्तिपूर्वक आहार ग्रहण गर्नुपर्छ। यसले शरीरको दोष, अग्नि र धातुलाई समान अवस्थामा राख्छ।
मल निष्कासनको प्रक्रिया ठीक प्रकारले हुन्छ। साथै मन वा इन्द्रिय प्रशन्न रहन्छ। हठयोगमा आहारको वयान गरिएको छ। भोजन मिठो र सुपाच्य हुनुपर्छ। त्यस्तो भोजन भगवानलाई समर्पित गरेर आमाशयको एक तिहाइ भाग पूर्ण गर्नका लागि खानु पर्छ।
आमाशयको एक चौथाई भाग पाचन क्रियाका लागि वायुका लागि खाली छाडिदिनुपर्छ। अतः जतिसुकै भोक लागेपनि भोक लागेको भन्दा केहि थोरै खानेकुरा खानुलाई मिताहार भोजन भनिन्छ।
आहार पौष्टिक, स्वादिलो हुनुपर्छ। सकेसम्म गाईको दुधले बनेको भोजन ठिक हुन्छ। साथै त्यसबाट धातुलाई पोषण र मनलाई खुसी प्राप्त हुनुपर्छ। भोजन केवल भोक मेटाउने वा पेट भर्ने साधन होइन।
भोजनले शरीरको सात धातु (रस, रक्त, मासु, हड्डी, मज्जा वा शुक्र) बनाउँछ। इन्द्रियलाई ऊर्जा दिन्छ। भोजनले शरीरको विकास गर्ने र त्यसलाई निरोगी बनाउने काम गर्छ।
त्यसैले भोजन गर्नुअघि त्यसको सही चयन गर्न सक्नुपर्छ। अर्थात त्यसमा आवश्यक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, बोसो, प्रोटिन, भिटामिन, खनिज, लवण र जल हुनुपर्छ।
भोजन गर्दा हतारमा वा छिटोछिटो गर्नु हुँदैन। भोजन बिस्तारै(बिस्तारै, प्रेमपूर्वक वा शुद्ध भावले गर्नुपर्छ । अक्सर हामी हतारमा चपाएर निल्छौ। यसो गर्दा मुखबाट निस्कने ¥याल खानामा सही ढंगले घुलमिल हुन पाउँदैन। त्यस्तो भोजन पेटमा पुगेपछि पाचन प्रणालीलाई बोझ हुन्छ।
यसले आन्द्रालाई कमजोर बनाउँछ। दाँतले पनि राम्ररी आफ्नो काम गर्न पाउँदैन, त्यसैले त्यो पनि कमजोर हुन्छ। खाना राम्ररी चपाएर खानुपर्छ, जसले गर्दा त्यसमा रहेको पौष्टिक तत्व हाम्रो शरीरमा राम्ररी प्राप्त हुन सकोस्।
त्यसैले के भनिन्छ भने, भोजनलाई त्यसबेलासम्म निल्नु हुँदैन, जबसम्म त्यो पिसिएर रसदार हुँदैन। यसै प्रकारले पेय पदार्थ पनि मुखमा राखेर पिउनुपर्छ। भोजन गरेको समयमा चिसो पानी पिउनु हुँदैन।
भोजन गर्नुभन्दा आधा घण्टा अघि वा आधा घण्टा पछि मात्र पानी पिउनुपर्छ। यस्तो खानेकुरा सेवन गरौ, जो स्वास्थ्यवर्द्धक होस्। खानपानमा नियन्त्रण गरौं।
व्यक्ति प्रकृतिसँग जति नजिक हुन्छ, उतिनै बढी स्वस्थ हुन्छ। अहिले रोगको कारण नै मानिसहरु प्रकृतिबाट टाढा हुनु हो। फलस्वरुप प्रकृतिबाट मिल्ने स्वभाविक उर्जा शरीरले पाएको छैन।
जबकी सम्पूर्ण प्रकृति हामीलाई स्वस्थ्य बनाइराख्नका लागि प्रयासरत हुन्छ। त्यसैले प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जस्तो कि, अन्न, फल आदिमा धेरै निर्भर हुनुपर्छ।
ऋतु अनुसार मिल्ने सब्जी, फल स्वास्थ्यमैत्री हुन्छ। जबकी कोल्ड स्टोरमा राखिएको खानेकुरामा पोषक तत्व हुँदैन। खानेकुरामा सबै किसिमको पोषण तत्व हुनुपर्छ।
साथै त्यसमा सबैखाले रंग पनि हुन आवश्यक छ। खाना सेवन गर्दा हातले गर्नु राम्रो हो। यो हाम्रो परम्परा पनि हो। हातले खाना सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने वैज्ञानिक तथ्य नै छ।
सामान्यत हामी दिनमा दुई पटक भरपेट खाना खान्छौ, जसले दुई पटक मल अर्थात दिसा बन्छ। तर, हामी एक पटक मात्र खासगरी बिहानको समयमा दिसा उत्सर्जन गर्छौं।
र, एक समय मल आन्द्रामै रहन्छ। यसले कब्जियत, ग्याष्ट्रिक, भारिपन, आलस्य, रक्त विकार, छाला रोग आदि हुन्छ। त्यसैले दुई पटक खाना खान भएपछि बिहान र साँझ दुई पटक शौचालय आवश्य जानुपर्छ।
हाम्रो शरीरमा वात, पित्त र कप यी तीन दोष अनिवार्य उपस्थित हुन्छ। यी दोष विकृत भएपछि शरीरमा अनेक प्रकारको रोग लाग्छ। शरीर जुन प्रकृतिको हुन्छ, शरीरमा जस्तो विकार हुन्छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर भोजन गर्नुपर्छ।
भोजन दुई प्रकारको हुन्छ, पथ्य र अपथ्य । जुन भोजन शरीरलाई स्वस्थ्य बनाइराख्छ, बल, बुद्धि, दीर्घायु दिन्छ, त्यो पथ्य हो । जो भोजन शरीरमा रोग उत्पन्न गर्छ त्यो अपथ्य हो। पथ्य–अपथ्यको जानकारी नहुँदा हामी यस्तो भोजन गर्छौं, जुन गर्न नहुने थियो।
गीतामा गुण–भेदको दृष्टिबाट आहारको तीन प्रकारको हुने भनिएको छ। सात्विक, राजसी, तामसिक। सात्विक आहारले आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख र प्रेम बढ्छ।
राजसी आहार लवणयुक्त, अधिक तातो, जलन पैदा गर्ने, रुखो हुन्छ। तामसिक आहार जो अधकल्चो, रसहीन, दुर्गन्धित, बासी र अपवित्र हुन्छ।
स्वस्थ रहन कस्ताे खानपान